लोक सेवा परिक्षाको लागि तयारि गरिरहेकाहरुका लागि सुझाव तथा सहयोगी सामग्री
आत्मविश्वास बढाउनको लागि यस्तो दिमागी कसरत गर्नुहोस्
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आफ्नो आत्मविश्वासलाई कसरी जोगाइराख्ने ?
खतरनाक तर पत्ता लगाउन गाह्रो हुने ‘Smiling Depression’
एउटा अनौठो मानिस, उसको नाम नै 'अनौठो' । हँसिलो अनुहार भएको उसको बोली पनि सार्है मीठो । उसले राम्रो जागिर गर्छ, साथी तथा समाजमा...
सफलताको लागि बिल गेट्सका १० सुत्र
बिल गेट्स पछिल्लो समयका विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्। माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालीक उनी समाज सेवाका काममा पनि उत्तिकै अग्रसर छन् । विश्वको ध्यान आफूतिर...
विद्यार्थीको पढाइको लागि सहयोगी टिप्स
विद्यार्थी जीवन आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यसलाई पछ्याउनको लागी हिंड्ने महत्वपूर्ण बाटो हो । राम्रो पढाइ तथा गहन अध्ययनले लक्ष्यलाई भेट्न सहज हुन्छ । यहाँ...
मानिसको जीवनमा आत्मविश्वासले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । आत्मविश्वासले नै मानिसले समूहमा आफ्नो विचार राख्न सक्ने, आफ्नो रुचि अनुसारको कामको सुरुवात गर्न सक्ने हुन्छ...
सकारात्मक तरिकाले हेर्नुहुन्छ भने अरुले आफूलाई विश्वास नगरेको अवस्था भनेको तपाईंले आफूलाई प्रमाणित गर्ने राम्रो अवसर हो । जब यो अवसरलाई बुझ्नुहुन्छ...
सकारात्मक सोंच निर्माणको लागि सजिला र प्रयोगात्मक ५ तरिका
व्यक्तिको सोंचले नै उसको जीवनको भविष्य झल्काइरहेको हुन्छ । जीवनमा घटिरहेका घटना, परिस्थिति र समग्र जीवनलाई व्यक्तिले कसरि लिन्छ, त्यसमा कसरि आफ्नो प्रतिक्रिया देखाउँछ,...
सफलता भनेको हाम्रा दैनिक बानीहरुको परिणाम हो । आज तपाईंले आफ्नो बानीमा, सोंचमा जुन कुरा विकास गरिरहनुभएको छ, भविष्य भनेको त्यसकै नतिजा...
पैसा बचतको लागि अपनाउनुहोस् यी दैनिक साधारण बानीहरु
पैसा सबैथोक होइन । तर, आफ्नो दैनिक जीवन निर्वाह गर्न र आफ्ना सपनाहरुलाई आकार दिन पैसाको आवश्यकता पर्छ । आफूसंग भएको बेलामा...
दश दिनसम्म एक शब्द समेत नबोली बस्दा मिलेको ज्ञान
तपाईं एक दिनभरी नबोली बस्न सक्नुहुन्छ ? एक युवाले दश दिनसम्म एक शब्द नबोली बसेपछि मिलेको नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् । म्यान्मारमा १० दिन...